Archive du 20170608
Fakana an-keriny Karana Lasibatra ny tompon’ny “Le Grand Mellis”
Vao ny alatsinainy5 jona teo no votsotra i Yanish Ismael, dia nipoitra sahady indray ny fakana an-keriny. Teratany karana zanaky ny tompon’ny hotely Le Grand Mellis sy ny tranombarotra Chandarana eny Tsaralalana indray no nisy naka an-keriny teny Behoririka omaly alarobia maraina tokony ho tamin'ny 8 ora latsaka fahefany.
Antenimiera 2 tonta Tsy misy ilana azy intsony ?
Tsy misy mandeha amin’ny laoniny intsony eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao, izay mbola porofon’ny tsy fahazakan’ny HVM ny fitondrana saingy minia mitapikitra toy ny dinta eo amin’ny seza ihany ny fanjakana tarihin-dRajaonarimampianina.
Fifidianana eto Madagasikara Laharana voalohany amin’ny kolikoly
Miisa 11 ireo sehatra anjakan’ny kolikoly eto Madagasikara, araka ny angon-kevitra nataon’ny firaisamonim-pirenena manerana ny nosy.
Lapan’i Mahazoarivo Nandray ny iraky ny OIF ny Praiministra
Nandray ny delegasion’ny DAPG na ny « Direction des Affaires Politiques et Gouvernance démocratique » avy amin’ny Oif na « organisation Internationale de la Francophonie » notarihan’Atoa Tadjoudine ALI-DIABACTE,
Taratasin’i Jean Faly misavorovoro
Izay ry Jean dia faly hanilika ny tsy fahombiazana aty amin’ny vahoaka tsy mandady harona aty fotsiny ! Inona indray izao no vaovao haparitakareo ato ho ato eo ? Ianareo mihitsy hay no tena tia manakorontana saim-bahoaka sy tia savorovoro eto a !
Kaonfederasionin’ny mpiasam-panjakana Manohana ny tolona misy rehetra
Nanao fanambarana tetsy amin’ny ANS Ampefiloha omaly ry zareo avy eo anivon’ny CSAEM na ny “Confederation des Syndicats et des Agents de l’Etat Malagasy” fa manohana ny tolona sendikaly rehetra izay mivondrona ao anatin’ity kaonfederasionin’ny sendikan’ny mpiasam-panjakana ity.
Fitakiana sendikaly Lasa tolona tandrametaka
Maivana sy tsy maharesy lahatra intsony ny resaka tolona sendikaly eto amintsika amin’izao fotoana izao.
Minisiteran’ny fanatanjahantena Manambana koa ny sendika
Nanambara tetsy amin’ny ANS Ampefiloha koa omaly ry zareo avy eo anivon’ny SynAF MJS na ny sendikan’ireo mpiasa eo anivon’ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena fa tsy hanaiky
Milavo lefona !
Samy maka ho azy sy samy manao izay danin’ny kibon’ny sisa eto amin’ny firenena fa tsy misy intsony izany lalàna ifampifezana izy.
PRIMA BABY Hanampy ireo ray aman-dreny amin’ny fitaizana ny zanany
Fito taona nijoroana ankehitriny ny Prima Baby miaraka amin’ny Madajeune.
Lalana Petite Vitesse Nalamina sady nodiovina
Nanomboka ny talata 6 jona dia nozaraina roa ny lalana Rainibetsimisaraka (Petite Vitesse),
Vatovavy Fitovinany Ben’ny tanàna 150 nofanin’ny CNaPS
Nofanina tao amin’ny renivohi-paritr’i Vatovavy Fitovinany ireo ben’ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy avy amin’ny kaominina 150 mandrafitra ny prefektiora.
Fikambanana Andrianiko ny tanindrazako “Tsy mahomby ny rafi-pampianarana LMD”
Tsy mahomby eto Madagasikara ny rafi-pampianarana LMD (Licence Masters Doctorat), izay mitaky fandaniana bebe kokoa kanefa ny ankamaroan’ny tanora Malagasy tsy maharaka ka tsy afaka mamita ny fianarany hatramin’ny farany, raha ny fahitan’ny Fikambanana Andrianiko ny tanindrazako azy.
Mpianatr’Ambohimanarina hanala CEPE Hahazo tohana hafakely avy amin’ny depiote Horace
Hafakely raha samy famerenana (revision) fanao hatrizay ity hokarakarain’ny depiote TIM, Rasoanoromalala sy ireo mpiara-miasa aminy hotanterahina eny amin’ny
Ankizy hoavin’ny firenena Omanina dieny izao
Naseho sy nalefa ho fanta-bahoaka omaly teny amin’ny hotely Ibis Ankrondrano ilay hira fanevan’ny « iray volan’ny ankizy » amin’ity taona 2017 ity izay mitondra ny lohateny hoe :
Nanambara ny CRAM na Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar fa miankina betsaka amin’ny fanintsiana ny Lalàm-pifidianana ny ho avin’i Madagasikara .